Indlela ukubhala izinkondlo? Kanjani ukufunda nokubhala izinkondlo
Abantu abaningi, ikakhulukazi intsha, ufuna ukubhala izinkondlo. Iningi lazo uzame ukuqamba into, kodwa yi ahehe nhlobo. Futhi ngenxa yalokhu, waqaphela izimbongi okungaka. Mhlawumbe hhayi kuwufanele ngizame kulesi simo? Noma kunjalo, inani yezimbongi amateur omkhulu, futhi kukhona zifiki ezingasho nsuku zonke.
Ingabe wonke umuntu abe imbongi?
Kunzima ukusho ukuthi kungani abantu ukubhala izinkondlo. Ngokuvamile, basuke kuqhutshwa yisifiso ukuveza imizwa yabo mayelana nezwe: ucezu umxhwele isimo sangempela, nakho inhliziyo, ukucabanga ngokuphila kudivayisi - konke lokhu kuba ingqikithi ezinkondlweni. Okungenani ingxenye yaleli vesi kulotshiwe njengoba uhlobo ekuphenduleni izenzakalo zokuphila yomphakathi (emlandweni samanje noma), okuyinto ujabule umlobi. Kunoma ikuphi, isizathu ukubhala izinkondlo ngokuvamile isisusa ngokomzwelo, futhi imigqa Rhythmic ezisebusweni khumbula imicimbi ukuphila kwangaphandle nangekhatsi.
Abantu abaningi bayazama isandla sabo esikhululekile bengenzi versification, futhi nawe ongakwenza ngazo, uma uzwa isifiso esinjalo. Yiqiniso, akukho muntu ongaqinisekisa ukuthi uyoba imbongi ezinhle, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya lokhu okuhlangenwe nakho ngeke. Okubaluleke kakhulu, wenza kanjalo uyokuqonda kanjani ukubhala.
Amanani ecacisiwe - Ivesi futhi esigaba
Uma uzama isandla sakho izinkondlo, akusiyo engadingekile ukwazi ezinye imiqondo ebalulekile ephathelene ne-prosody.
Ivesi ... Le izwi inezincazelo ezimbili. Okokuqala, Ngolimi olusankondlo, ihlelwe isiko elithile (isibonelo, "evesini Pushkin sika"). Umugqa wesibili atishaye eyakhelwe umbhalo senkondlo.
Ukusetshenziswa okungavumelekile igama elithi "v" ngomqondo "inkondlo", njengoba ingxenye yokuqala ingxenye yesibili noma (kwezinye izimo) kuyinto umqondo ebanzi kakhulu kunenani umkhiqizo owodwa.
Inhlanganisela ka imigqa emibili noma ngaphezulu ivesi (amavesi) ngokuthi evesini.
Phakathi kwalezi inhlanganisela couplet letihloniphekile, izinkondlo ezintathu-line, quatrain ... nokunye, kuze izinkondlo eziyishumi.
Isihloko esilandelayo sizochaza ukuthi imiqondo ebalulekile eziningana. Ukuqonda kwethu esenza ukuba izinkondlo bhala abantu abahlukene, futhi lokho kungaba wusizo futhi ngazwisisa incazelo yamagama ukuthi ukudida abafundi kanye izimbongi eziningi Olufufusayo. Okulandelayo kuzoxoxwa izimfihlo ubhala inkondlo lebhaleke kahle.
Isinyathelo sokuqala: ukuqala kuphi?
Uma ungakaze wahlanganyela versification, kunengqondo ukuqala ukufunda izinkondlo neyaziwayo abalobi. Akunjalo ngempela ngokushesha ubambe ukuze zabuna, uma akusiyo ngendlela esilindele yakho. Qala nabalobi wesimanje, bese uya izimbongi we Isiliva Ubudala, bese ungakwazi izinkinga repertoire yakho umtapo. Uma namanje angazi kanjani ukuqala ukubhala izinkondlo, njengoba ngaleso sikhathi nje thola futhi ufunde ukuthi uthola i-echo emphefumulweni wakho. Kungenzeka kakhulu ukuthi izingcezu yokuqala esizimele umculo uyobe othanda umsebenzi walabo izimbongi ngubani okuthanda kakhulu. Phatha lokhu njengoba isigaba sokuqala ukuqeqeshwa okuqhubekayo ukuqamba, njengoba kuvela. Akusiyo imfihlo ukuthi amavesi okuqala yezimbongi ezidumile eziningi kamuva babe imitative. Kodwa umuntu okwakhayo kokuphishekela imigomo uzokwazi ukuthuthukisa amakhono abo futhi uthole unendlela yakhe yokuloba. Kholwa ngokwakho, zama, ukuhlola.
Kodwa ukwazi kulokho isiqondiso ukuya, siyowuqonda e zilwane eyinhloko izinkondlo.
Ake sixoxe ngendlela ungazama uhlobo. Ukuze uthole umqondo ezicashile natures efanelekayo izinkondlo lyrical nefilosofi ballads futhi mavesi. Labo nesithakazelo ekuphileni kwemvelo asebenzayo zenhlalo, ungazama nokubhala izinkondlo lesibonwa. Okunye okuphawulekayo satirical, ezihlekisayo kanye satirical izinkondlo - ezinye zezinhlobo lezi izinhlobo abathandwa abafundi engengaphansi kwengu inkondlo sina.
uhlobo ekhethiwe kanye nesitayela usitshele ukuthi ukubhala. Ivesi lisho "indlela esankondlo inkulumo inkulumo ethi" elabhalwa imithetho ethile. Bala izinhlobo zezinkondlo:
ivesi emhlophe (imvumelwano okungaxhunyiwe ku-intanethi, kodwa ngokucacile agcinwayo ubukhulu futhi ulinganisele);
zokuzikhumbuza (ngendlela yokuloba, lapho izinhlamvu zokuqala emgqeni ngamunye kwakha igama, okungenani emibili noma emithathu);
ivesi okuxubile (indlela yokubhala ngaphandle kokulondoloza usayizi ofanayo lonke umkhiqizo);
izinkondlo namaprozi (akukho imvumelwano nesigci, kodwa zinendlela ekhululekile ivumela zokuhlukanisa kubo njengoba tinkondlo);
verlibr (isitayela inkimbinkimbi, lapho ukwakhiwa imigqa ekhethekile, izithombe emfushane te futhi ungekho imvumelwano).
Ngokulandelayo, sizohlola yezingxenye esemqoka kule nkondlo: imvumelwano, isigqi kanye nosayizi.
kuyinto imvumelwano kanjani?
Ngakho, unqume ukuthi izitayela esankondlo kanye nezindlela versification ufuna ukuzama ngokwakho. Kodwa isifiso Omncane ukuba bahlanganyele izinkondlo, udinga ukwazi ukuthi. Bhala ivesi - umugqa komsebenzi wakho ngamunye - udinga ngokuvumelana nemithetho ethile kuphela.
Elinye lamaphuzu ebaluleke kakhulu imvumelwano - ophela ungwaqa amagama amabili noma ngaphezulu. Njengoba wazi, enkondlweni amazwi anjalo ezibekwe ekupheleni imigqa. Kulesi imvumelwano kukhona eduze mavesi amabili noma ngokusebenzisa omunye, ngezinye izikhathi ezimbili. Ngo imvumelwano has izinhlobonhlobo yayo:
amadoda (kanye nokugqamisa ku ilunga lokugcina);
Abesifazane (ukucindezeleka ewela ilunga penultimate);
dactylic (ne nokugqamisa ku ilunga lesithathu kusukela ekupheleni komugqa);
giperdaktilicheskaya (nokugqamisa ku ilunga lesithathu, noma ngisho ngaphezulu).
Kukhona nezinye izinhlobo eziningi, kodwa imbongi imfundamakhwela usenganikeza ufunde eziyisisekelo. Kubalulekile ukuthola imvumelwano ofanele futhi original, akubonakali "uthando - igazi" noma "neze -. Wake" Ngaphandle ekhethelwe imvumelwano amagama organically kufakwe umbhalo senkondlo, ukudala isithombe kuqondakale ukuze adlulisele imbongi.
Uma ufuna ukwazi ukuthi ukubhala izinkondlo, nawe ubheke imiqondo imitha asankondlo isigqi.
Kungani sidinga ubukhulu nesigci?
Usayizi inkondlo kubaluleke kakhulu ngoba inquma umsindo, umculo, isimo emsebenzini. Nquma usayizi inhlanganisela kungenziwa wagcizelela kanye amaqoqo ezinhlamvu unstressed emigqeni 2-3 izinkondlo umkhiqizo. Uma ucabanga ukuthi ukufunda nokubhala izinkondlo, zama ukuhlaziya umkhiqizo wakho ayintandokazi ezinobukhulu ukuba baqonde indlela umbhali ithole nomphumela ofiselekayo.
Omunye wagcizelela nohlamvu nokukodwa unstressed. Esikhathini ukucindezeleka iambic ewela ilunga wesibili, njengoba e chorea ekuqaleni.
Omunye nohlamvu percussive, kanti ababili - unstressed. Umehluko kule Yikuphi ilunga egcizelelwayo: okokuqala - dactyl, kwesibili - amphibrach yesithathu - anapaest.
Ingabe ulwazi Ubukhulu olusankondlo kuzosiza ukufunda indlela ukubhala izinkondlo? Wona - mhlawumbe, kodwa ukubheka "ngaphakathi" senkondlo namanje ewusizo. Ukuhlaziya okunjalo lembula ukuthi akusilo obonakalayo ekufundeni evamile, futhi likuvumela ukufunda indlela yokwakha sibalo senkondlo.
Elinye iphuzu elibalulekile isigqi - alternation cyclical amaqoqo ezinhlamvu unstressed ngenxa yokushaqeka. Ukuze uthole ukuzizwa engcono isigqi, ufunda ngokuzwakalayo inkondlo ebhalwe.
Safunda okuningi ngetinkondlo, kodwa namanje engasonjululwa ngokugcwele inkinga kanjani ukubhala. Ivesi - umugqa owodwa, okuyinto yakhiwa inhlanganisela senkondlo. Lokho-ke akuzange nje yakha kodwa futhi okuqukethwe, odinga ukukwazi futhi bakwazi ukusebenzisa amasu senkondlo. Nazi ezinye zazo:
ukushiyana kwezidalwa (okhulisa);
isikhalazo bokukhuluma noma umbuzo;
Ukwazi lezi amasu ngokwako akusho ukuthi ikutshele ukuthi ufunde nokubhala izinkondlo. Kodwa uma ukujwayela ukuthola izindlela kwezobuciko emisebenzini zabanye abantu, kuba sobala ukuthi ongazisebenzisa emsebenzini yabo.
Imbongi noma graphomaniac?
Ake sithi Ubhale izinkondlo eyodwa noma ngaphezulu. Kanjani ukuthola indlela okuhle kwazo? Do it ngokwakho - akulula, akusona isizathu, futhi ekuqhumeni ugqozi, sibhala izinkondlo. Ngokwabo ngesikhathi esifanayo sikwazi simdumise njalo umugqa lokusungula yabo, kodwa kungakhathaliseki ukuthi kuzobangela entshisekweni ofanayo kwabanye? Enye indlela ukuthola - ukufunda izinkondlo zabo kwabanye. Uma ungase ube nentshisekelo ubuqambi omunye umuntu, eduze ukuqonda indlela ukubhala izinkondlo ezinhle ngaleso sikhathi.
Izici eziyinhloko senkondlo yimpumelelo:
Umfundi azizwa nomuzwa wokuthi umlobi etshaliwe, noma ubone isithombe ezichazwe ngenhla;
Fresh, imilolotelo yasekuqaleni ezilungele ngaphakathi kokuchaza kanye nemizwelo;
waphawula ubukhulu nesigci zonke imigqa;
kungekho inkulumo, amaphutha wesitayela nezinye (ngaphandle uma kuziwa reception zokudala).
"Ngifuna ukubhala izinkondlo, yini okufanele uyenze?". Elinye ikhambi - ukubhala. Futhi ngizifunde, nendalo akuyona kuphela amakhosi wavuma, kodwa futhi Wabasaqalayo. Ukusenza umkhuba nekuhlatiya izingcezu zabanye abantu umculo, uyofunda ikhono ukubhala izinkondlo, njengoba futhi uyokwakha ikhono lokuhlukanisa yimpumelelo kusukela umugqa akuphumelelanga. Kodwa alungele yokuthi ukuqeqeshwa kakhulu ekuthuthukeni isitayela uzobe iminyaka eminingi, uma kungekhona konke ukuphila komuntu.
Imisebenzi Gianni Rodari izingane: uhlu
"Isiphepho esikhulu seqhwa". Pushkin. Isifingqo inoveli
"Gambrinus". Isifinyezo, ukuhlaziywa, ukubuyekezwa
Ukuphela kwezinto eziphilayo ezinhlobonhlobo: izimbangela nemiphumela. izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo
Indlela ukuya "Flibustu" nokulanda kusuka kusayithi? Indlela ukuya "Flibustu" ngokusebenzisa "Thor"?
Indlela yokwenza imali ku umdlalo? Indlela yokwenza imali ku imidlalo inthanethi?
Aerogrili - indlela ukukhetha, musa lost ububanzi elikhulu?
Apple pie: imvubelo inhlama ukhilimu omuncu, Vegetarian
Okukushoyo nail ukukhula. ukunakekelwa Nail ekhaya
Umbuso wezinambuzane: inhlanzi enkulu kunayo yonke emhlabeni